गुणस्तरहिन चामल खरिदसंगै ५ करोड भ्रष्टाचार पनि ! - Jagaran Post
Home/पत्रपत्रिकाबाट/गुणस्तरहिन चामल खरिदसंगै ५ करोड भ्रष्टाचार पनि !
गुणस्तरहिन चामल खरिदसंगै ५ करोड भ्रष्टाचार पनि !
२०७७ भाद्र २२, सोमबार १०:०१ गते
काठमाडौं – कमिसनको चक्करमा ५ करोड बढी रुपैयाँ घोटाला गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले महँगोमा गुणस्तरहीन चामल खरिद गरिरहेको पाइएको छ । खाद्य कम्पनीका केही कर्मचारीले व्यापारीसँगको मिलेमतोमा चलखेल गरेर महँगोमा चामल खरिद गरेका हुन् ।
कार्यकारी सुवेदीले चामल खरिद गर्दा चामलको गुणस्तरमा कुनै तलमाथि नगरी खाद्य प्राविधिकको रिर्पाेटअनुसार नै चामल भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले खाद्य कम्पनीकै केही कर्मचारीले खाद्य प्राविधिकको निर्देशन नटेरी मनमानी गर्ने गरेको भान भएको बताए । तर, आपूmले प्राविधिकको रिपोर्टलाई व्यवस्ता नगरेर उनीहरूकै सुझावअनुसार नै खाद्य भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले बताए- राजधानी दैनिकबाट।
२०७६ असार २, सोमबार ०७:२७ गते
श्रमिकहरु बिचल्ली पार्ने ब्यवसायीसंग सांठगाँठ गर्दै श्रममन्त्री यादव
२०७७ असार २५, बिहीबार ०७:०० गते